Isamsung ukuyisiphula ngaphandle iqhosha layo lasekhaya kwi-Galaxy S8 | Iindaba zeGajethi
Isamsung iya kususa iqhosha layo lasekhaya kwi-Galaxy S8
Zibophelele kwinto ethile izinto ezizeziphasiwedi Ibrand yakho inezibonelelo zayo kunye nezinto ezingalunganga. Kwi-iPhone oko kuthetha ukuba uhlala ushiya isithuba esisezantsi esingafikeleleki ngalo lonke ixesha ufuna ukucinga ngolunye uyilo olukhokelela kutshintsho kweso sixhobo sitsha, esisikhubekiso kwinkululeko yabo ngubani abayila ezi ntlobo zeemveliso.
Kwaye kubonakala ngathi Ndiza kuncothula neengcambu Isamsung kwiGPS S8 yayo elandelayo, kwaye kukuba ngokweengxelo ezininzi, iflegi elandelayo yomenzi waseKorea iyakususa iqhosha layo lasekhaya. Olu qikelelo luvela kulwazi lwakho lwe imbue isivamvo somnwe esikrinini kunye nokulinda iiodolo zokwenza i-terminal.
Ngaphambi kokuba uyazi ukuba i-Galaxy S8 iya kuba nayo I-90% yesikrini / umlinganiselo wevolumu, Besineendaba zokuba zinokudibanisa isithwebuli somnwe se-ultrasonic esenziwe kwiscreen esinye. Ezi ndaba zinxulunyaniswa naleyo ye-Mi MIX, ene-sensor efanayo efakwe kwiphaneli, kwaye iziphumo ze-Galaxy S8 enokuthi ifane kakhulu nomenzi waseTshayina.
Ke siyazi ukuba abo baphetheyo benza ezona ndawo zibalulekileyo zeGPS S8, njengaleyo yendawo ifunekayo kwiskena kunye nezinye iindawo, ndisalinde iiodolo zayo, ke sijamelene nengqikelelo enokuba nenyaniso eninzi: ukupheliswa kweqhosha lasekhaya eliyimbonakalo yeGalaxy S8.
Ukuba sijonga enye yeenzuzo ezinkulu zesikena se-ultrasonic, ngokuqinisekileyo ayisiyongqondo iphambeneyo, kwaye iqabane lam uJordi wathetha ngalo kwinyanga eyi-1 edlulileyo, Elo qhosha liyanyamalala ukuvumela inzwa ifunde iminwe naxa isandla simanzi okanye ekubileni okuninzi, ingxaki yabenzi beefowuni basazifumana bekubo bafundi bebhayometri.
Siza kubona ukuba iphi kwaye ukuba loo maphupha mahle yenzeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Isamsung iya kususa iqhosha layo lasekhaya kwi-Galaxy S8